ROMANA 3.1-8	F. 1, 6 | Fitandremana Ankadifotsy
ROMANA 3.1-8	F. 1, 6
Mahatoky amin’ny fanekeny (1-4). Ny Jiosy nomena fahalalana an’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny lalàna (2). Tombontsoa ho azy izany (1). Tamin’ny firenena Jiosy ihany mantsy Andriamanitra no naneho ny tenany mivantana, ka nanavahany azy tamin’ny alalan’ny famorana. Na dia nanao tsinontsinona izany tombontsoany rehetra izany aza anefa ny Jiosy (3), dia tsy miova tamin’ny teny fanekeny efa nataony tamin’i Abrahama Izy (Genesisy 12.2; 17.13). Moa tsy migoka izany fanekena natao izany koa isika mpino ankehitriny satria Ilay Teny tonga nofo, Jesoa Kristy, dia teraka Jiosy, fa voasoratra hoe “aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.” (Genesisy 12.3b), “avy amin’ny Jiosy ny famonjena.” (Jaona 4.22)
Manameloka ny tsy marina Izy (5-6). Na mahatoky amin’ny teniny aza Andriamanitra (4), dia tsy mahafoana ny handatsahany ny fahatezerany amin’ny mpanao meloka izany (5b). Izay indrindra no mampiharihary ny maha-marina an’Andriamanitra (5a). Noho izany dia afaka manafay malalaka amin’ny fahamarinany sy ny fiandrianany Izy (6).
Manohitra ny fahotana ny fahasoavany (7-8). Misy ireo mihevitra fa toa manentana ny olona hanota ny filazan’i Paoly ny fahasoavan’Andriamanitra, ka soa ihany fa nanao ratsy ny olona mba ampiharihary fa marina Andriamanitra. Ho voaheloka marina anefa ny misaina toy izany satria manosihosy ny fahamarinan’Andriamanitra. Ny olona tena nandray ny fahasoavan’Andriamanitra mantsy dia entanin’ny fitiavan’i Kristy azy teo amin’ny hazo fijaliana ka miezaka hankato ny teniny mandrakariva mba hahafaly Azy.
Saintsaino : “Sanatria izany! Aoka Andriamanitra no ho marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga; araka ny voasoratra hoe: «Mba hohamarinina amin’ny teninao Ianao, ary hahery rehefa manana ady»(4).